Parameter an'ny takelaka tsy miova asphalt izay novaina: sakany: 980mm matevina: 2.5mm halavany: 2m & / arakaraka ny fangatahan'ny mpanjifa isa onja: 7 haavon'ny onja: 24mm ny onja: 70mm Torolàlana momba ny lamina: 1. Quote fanadihadiana-matihanina. 2. Hamafiso ny vidiny sy ny habetsany, ny fotoana itarihana, ny famolavolana, ny fandoavam-bola sns ...
Ny efitrano fandriana dia mety ho lebensraum lehibe amin'ny fiainantsika. na mora ny firafitry ny efitrano fandriana na tsia dia mety hisy fiatraikany amin'ny fenitry ny fitsaharan'ny olona, ​​avy eo mikasika ny fiainam-bahoaka, ny asany ary ny fianarany. noho izany na izany aza, ny efitrano fandriana dia tokony hohaingoina rehefa nohavaozina ...
Waterproof SPC Vinyl Flooring any Shina
Spc gorodona dia fanavaozana ny taila vita amin'ny vinyl lafo vidy, Natao manokana miaraka amin'ny rafitra mifamatotra click. Fitaovana virjina 100%. Ny gorodona vita amin'ny vinina SPC dia mateza tokoa, manana fanoherana avo dia avo amin'ny dents sy gorodona, izay olana lehibe amin'ny gorodona hazo matevina. Tsara napetraka ary adeq ...
Boribory vita amin'ny tafo mitafo borosy
Ny Corrugated Roofing Tile dia misy faharetana maharitra eo amin'ny tontolo voajanahary. Na dia ao anatin'ny toe-javatra sarotra atrehana amin'ny UV, mari-pana ambony sy hatsiaka mangatsiaka aza, dia mitazona loko milamina ihany. Tombony: Loko maharitra (10 taona farafahakeliny) Ahitana faharetana maharitra amin'ny vokatra voajanahary ny vokatra ...
Mpamatsy trano fonenana vita amin'ny tafo vita amin'ny tafo synthetic
Ny resinay synthetic Roofing tile Residential dia matetika ampiasaina amin'ny toeram-pambolena villa sns. Izy io dia tsy misy tantera-drano, henjana, mafana, tsy harafesina, mahazaka rivotra, anti-shock, anti-icing, maitso ary sariaka amin'ny tontolo iainana. Fampiharana: trano heva, fiaramanidina, kianja filalaovana, villa, vohitra fialantsasatra, mobil ...
Tile vita amin'ny tafo mitafo amidy
Ny Corrugated Roofing Tile dia novolavolaina mifototra amin'ny teknolojia mandroso iraisam-pirenena. Izy io dia fitaovana manokana mitafo tafo ho an'ny ozinina fanodinana akora manimba sy faritra misy orana asidra matetika. Sosona voalohany: karazana resina misy fanoherana ny toetrandro avo lenta. Noho ny ...
Wholesale Panel haingon-trano PVC
Antsipirian'ny haingon-trano PVC haingon-trano: famaritana: sakany (cm): 10,16,18,20,25,30,40,59.5,60,60,3 na haben'ny namboarina (mm): 5,6,6.5,7,7,5,8, 8.5,9,10,11,12 na ny halavan'ny namboarina: 2.97m, 5.8m, 5.95m na votoatin'ny namboarina PVC: 35% - 75% lanja: 1.5KG - 5.0KG isaky ny kianja Fanamarihana: Ny fitakiana rehetra dia mety ...
Waterproof WPC Vinyl Flooring amidy
Waterproof WPC Vinyl Flooring tombony: Sariaka ara-tontolo iainana: Tsy misy poizina, tsy misy rano tsy misy rano, Tsy misy metaly mavesatra, Tsy misy zavatra mora miovaova. Salama: Antibacterial, Mouldproof, Anticorrosiion, Tsy misy fofona. Azo antoka: Tsy misolosolo, manohitra ny statika, manaporofo rano, manaporotra afo. Mahazo aina: Mitohy ny maripana, mety ...
Mpamatsy tontonana Wholesale Wholesale PVC
pvc rindrina tontonana: Ny rindrin'ny rindrina pvc 20cm-60cm ny sakany, 6mm-10mm ny hateviny. manana kalitao tsara miovaova, fanondranana any UK, USA, EUR. 1) Toeram-pisolahana avo lenta, malama 2) Ny loko isan-karazany sy ny lamina 3) Fidirana avo lenta, manohitra ny harafesina, fotoana lava iainana, tsotra hitazomana 4) Salama sy tontolo iainana, 5) Ampiasaina be ...
Trapezoidal Roofing Tile fivarotana an-tserasera
Ny tile vita amin'ny resa synthetic ASA dia mampiasa teknolojia Co-extrusion telo sosona mandroso. Manana fanoherana manimba harafesina, insulation hafanana, fanoherana ny fiantraikany izay manome ny valin'ny tafo ASA maharitra maharitra sy maharitra ny fiainam-panompoana. 10 taona tsy miloko, 25-30taona ny androm-piainany. Miaraka amin'ny ex ...